Aiqiyi သည် ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင် ၉ ၆၈. ၁ သန်း အရှုံးပေါ် ခဲ့သည် – Pandaily
Mar 01, 2022, 19:42ညနေ 2022/03/01 23:13:29 Pandaily
တရုတ် ဗီဒီယို ပလက်ဖောင်း Aiqiyi သည် ၂၀၂၁ ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာ ၃၁ ရက်ကုန်ဆုံး သည့် စတုတ္ထ သုံးလပတ် နှင့် ဘဏ္ fiscal ာရေး နှစ်အတွက် စာရင်း မသ ွင်း ထားသော ဘဏ္ results ာရေး ရလဒ်များကို ကြေငြာခဲ့သည်။ပြီးခဲ့သည့်နှစ်က စုစုပေါင်း ဝင်ငွေ ယွမ် ၃၀. ၆ ဘီလီယံ(ဒေါ်လာ ၄. ၈ ဘီလီယံ) ၊ ၂၀၂၀ မှ ၃% တိုးလာသည်။
Aiqiyi သည်ယွမ် ၆. ၂ ဘီလီယံ အရှုံးပေါ် သင့်သည်။ ၂၀၂၀ တွင် Aiqiyi သည်ယွမ် ၇ ဘီလီယံ အရှုံးပေါ် သင့်သည်။
ပြီးခဲ့သည့်နှစ် စတုတ္ထ သုံးလပတ် တွင်စုစုပေါင်း ၀ င်ငွေ သည်ယွမ် ၇. ၄ ဘီလီယံ ရှိခဲ့ပြီး ၂၀၂၀ ခုနှစ် အလားတူကာလ နှင့်အတူတူ ပင်ဖြစ်သည်။ Aiqiyi သည်ယွမ် ၁. ၈ ဘီလီယံ အရှုံးပေါ် သင့်ပြီး ၂၀၂၀ ခုနှစ် အလားတူ ကာလတွင် Aiqiyi သည်ယွမ် ၁. ၅ ဘီလီယံ အရှုံးပေါ် ခဲ့သည်။
အသင်း ၀ င် ၀ န်ဆောင် မှုမှ ၀ င်ငွေ သည်ယွမ် ၄. ၁ ဘီလီယံ ရှိပြီး တစ်နှစ်လျှင် ၇% တိုးတက်ခဲ့သည်။ ပျမ်းမျှ နေ့စဉ် စာရင်းသွင်း သူ အရေအတွက်သည် ၂၀၂၀ ခုနှစ် အလားတူ ကာလက ၁၀၂. ၇ သန်း နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် ၉၇ သန်း ရှိသည်။ စတုတ္ထ သုံးလပတ်တွင် အဖွဲ့ဝင်တစ် ဦး ချင်းစီ ၏ပျမ်းမျှ လစဉ် ဝင်ငွေ (ARM) သည် ၂၀၂၀ ခုနှစ် အလားတူ ကာလက ၁၂. ၄၅ ယွမ် နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် ၁၄. ၁၆ ယွမ် ရှိသည်။
Aiqiyi ကိုတည်ထောင် သူနှင့် အမှုဆောင်အရာရှိချုပ် Gong Yu က “ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ရည်မှန်း ချက်က ၂၀ ၂၂ ခုနှစ် တစ်လျှောက် လုံးမှာ GAAP မဟုတ်တဲ့ လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှု ကိုချိုးဖောက် ဖို့ ဖြစ်တယ်၊ သုံးလ တစ်ကြိမ် GAAP မဟုတ်တဲ့ လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှု ကိုချိုးဖောက် ဖို့ ဖြစ်နိုင် သမျှ အမြန်ဆုံး ရောက် ဖို့ ဖြစ်တယ်” ဟုပြောကြားခဲ့သည်။
မကြာသေးမီက ကျင်းပခဲ့သော ၂၀၂၁ ခုနှစ် တရုတ် Golden Rooster Baihua ရုပ်ရှင်ပွဲတော် ဖွင့်ပွဲ ဖိုရမ် ၏ စား ပွဲဝိုင်း ဆွေးနွေးပွဲတွင် Gong Jun က အွန်လိုင်း ရုပ်ရှင် ၏စီးပွားရေး ပုံစံ ကိုပြန်လည် ပုံဖော် ။ ရုပ်ရှင် များအတွက် ၀ ယ်လိုအား ၀ န်ဆောင်မှုပေးရန် အကြံပြုခဲ့သည်။ “ အွန်လိုင်း ရုပ်ရှင် လက်မှတ် တွေ တက် တော့ မယ်၊ အခု ခြောက် ယွမ် က အရမ်း နည်း တယ်!” “ ဟု သူက ဆက်ပြောသည်။
ဒါ့အပြင် ကြည့် ပါ:Zhejiang ပြည်နယ် စားသုံးသူ ကောင်စီသည် ကြော်ငြာ နှင့် Aiqiyi ကဲ့သို့သော ဗီဒီယို ပလက်ဖောင်း များအကြောင်း ဆွေးနွေးခြင်း
ပြီးခဲ့သည့် နှစ်ကုန် ပိုင်းတွင် Aiqiyi သည် လစဉ် နှင့် သုံးလ တစ်ကြိမ် ရွှေ VIP အသင်း ၀ င် ကြေး ၂၀% တိုးမြှင့်ခဲ့သည်။ “ အသင်း ၀ င် ကြေး သည် နိမ့်ကျ နေပြီး ကုမ္ပဏီ ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ကိုထိခိုက် သည်။” Ai Qiyi ကဆိုသည်။ “ ကျွန်တော် တို့ သည် ပိုမို ကောင်းမွန်သော လုပ်ငန်း ဆိုင်ရာ ဂေဟ ဗေဒ ကို ဖန်တီး ရန် ၊ အကြောင်းအရာ ပံ့ပိုး သူ များ သည် သူတို့ ၏ အလုပ် မှ အကျိုးအမြတ် များ ရရှိ ရန် နှင့် ကျွန်ုပ်တို့ ၏ အဖွဲ့ဝင် များ အတွက် ပိုမိုကောင်းမွန်သော အကြောင်းအရာ များ ကို ထောက်ပံ့ ရန် အတွက် နှုန်းထား များ ကို တိုးမြှင့် ရန် ဆုံးဖြတ် ခဲ့သည် ။”